Weelkadda Birta-Aan-la'aanta ah, Weelkadda Jikada, Dooxada Musqusha - NODMA
Saxanka Birta Aan Lahayn
Qurxinta Sare ee dhalada
Saxanka oo riixaya
Saxanka Laba-geeska ah
Saxanka Kelida ah
NODMA – hormood ka ah heer-sare
warshadaha saxanka jikada
soo saaraha caalamiga ah ee saxannada birta ah ee birta ah
HADDA wax ka iibso XAQ DARADA HADDA
Abaalmarinta Nakhshad Cusub
Tusaalaha Maalmaha Diyaarinta
NODMA waxay leedahay noocyo kala duwan oo noocyo ah, oo ay ku jiraan saxanadaha birta, tubooyinka, saxarada musqusha ee birta-la'aanta ah, iyo agabka ganacsiga ee kala duwan.Naqshadaynta cusub ee alaabadu waxay kaa caawin kartaa inaad si fiican u qabsato saamiga suuqa oo aad kor u qaaddo ku dhegganaanta macaamiisha.
Xuubyada Birta Aan Lahayn
Daawo warkoo dhan
NODMA saxanka birta ah ee aan wanaagsanayn ayaa si weyn loogu isticmaalay huteelada, makhaayadaha, baararka, iyo xarumaha dawladda.Ma aha oo kaliya qurux laakiin sidoo kale waa sahlan tahay in la nadiifiyo saxanadaha birta aan fiicnayn ee tayada sare leh.Waa kuwan saddexda saxan ee ugu sarreeya ee birta aan-ka-soo-baxa ah ee ay NODMA u samaysay tixraacaaga:
Saxan yar oo Gacan-gacmeed lagu Sameeyay oo leh Koob Rinser NQ466
Wasaqda Gacan-gacmeed ee Raaxada ah SUS304 Sink Steel-La'aanta ah...
Nano Jikada Wasaqda-Dhulka-Shaqada Madaw...
SUS304 Laba-geesood oo Laba-geesood ah
Multi-function Top Mount Jikada Quraacda MT948B
Alaabooyinka Musqusha ee Birta Aan Lahayn
Biyo-baxyada birta-la'aanta ah iyo nichesku waa kuwo deegaanka u fiican oo waara.Intaa waxaa dheer, midabyo kala duwan iyo cabbirada cabbirka waxay la kulmi karaan qaabab kala duwan oo qurxinta guriga.
Basinka Musqulaha ee Birta Layliga ah
Basin musqusha oo wareeg ah oo bir ah
Niche birta aan lahayn
Fadlan nagu dhaaf annagu waxaanu kula xidhiidhi doonaa 24 saacadood gudahood.
DAAWO WAX KA BADAN
Soo saaraha hormuudka u ah alaabta jikada iyo musqusha
NODMA waa soosaaraha ugu sarreeya ee birta aan daacin iyo alaab-qeybiyaha gudaha Shiinaha oo leh khibrad 20 sano ka badan.
NODMA waa soo-saare dhameystiran, oo hormuud u ah warshadaha soo saarista jikada iyo alaabta musqusha.
NODMA waxaa ka go'an inay xalliso dhammaan noocyada mashaakilaadka ku rakibida iyo isticmaalka si ay u siiso khibrada ugu fiican macaamiisha.
AKHRISO OO DHAGEYSO SHEEKADA
Waa maxay sababta
Walxaha birta ah ee aan tayada lahayn ee tayada sare leh
NODMA waa uun wax soo saarkeeda POSCO birta aan-ka-baxa lahayn, kaas oo 100% dib loo warshadayn karo oo deegaan ahaan u wanaagsan.Qalabka ceeriin ee soo galaya ayaa kuu keenaya isku-dhafka ugu fiican ee u dhexeeya quruxda iyo shaqeynta iyo ilaalinta deegaanka oo leh naqshad casri ah.
Waxaad dalban kartaa saxanka saxanka ee caadiga ah sida waafaqsan baahidaada.Xitaa macaamiishu waxay u baahan yihiin inay noo sheegaan suuqa bartilmaameedka ah, waxaanan kuu habeyn doonaa badeecada si waafaqsan sifooyinka suuqaaga.Waxa kale oo aanu haynaa alaabo naqshadeed cusub oo gaar ah si ay kaaga caawiyaan inaad si dhakhso leh ula qabsato dareenka macaamiishaada oo aad u qabsato suuqa.
3 Maalmood Muunad Wakhtiga Bixinta
Kooxdayada wax-soo-saarka waxay leedahay waayo-aragnimo toban sano ka badan oo ku saabsan shaybaarrada wax-soo-saarka.Wakhtiga hogaanka saddexda maalmood ah ee muunada gacanta lagu sameeyo ayaa kuu ogolaanaysa inaad hesho muunaddaada, xaqiijiso tayada, oo aad si dhakhso leh u tijaabiso suuqa.
Badeecooyin iyo Qalab Balaadhan
Alaabooyinka taxanaha ah ee NODMA waxaa ka mid ah saxanadaha jikada, qasabadaha, weelasha musqusha, iyo agabka kale ee la socda.Wasakhyada weelku waxay leeyihiin weel quraarad ah, weel labanlaab ah oo saxan ah, weel kaliya oo saxan ah oo leh looxa biyaha shubaya, saxannada labanlaaban ee saxanka oo leh looxa biyaha daadiya, iyo saxannada saxannada badan oo kala duwan—alaab kala duwan si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.Intaa waxaa dheer, adkeysiga saxanadaha si ay ula kulmaan khibradda badeecada ugu dambeysa ee macaamiisha.
Waa maxay maadada alaabtaadu?
Maaddadu waa SUS 304 birta aan lahayn.
Sideen ku ogaan karnaa tayada ka hor inta aan la dalban?
Tusaalooyinka waxaa la bixiyaa imtixaannada tayada leh.
Sideen u dammaanad qaadi karnaa tayada?
Waxaan haynaa muunad wax-soo-saar ka hor ka hor wax-soo-saarka guud.Waxaan leenahay kormeer buuxa ka hor shixnadda;
Waa maxay faraqa u dhexeeya saqafka hoose iyo kan sare?
Saxanka hoostiisa ayaa lagu rakibay miiska miiska hoostiisa.Saxanka hoostiisa ama meesha sare ee saxanka ayaa lagu rakibay dusha miiska miiska.
Waa maxay shuruudaha lacag-bixinta?
Caadiyan TT, ama wax kale sida codsigaaga.
Hel shaybaarro bilaash ah maanta
Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno!Noo soo dir fariin adoo isticmaalaya foomka ka soo horjeeda , ama noo soo dir email .Waxaan jeclaan lahaa inaan kaa maqlo!Noogu soo dir fariin adigoo isticmaalaya foomka hoose
Sida Looga Hortago Daxalka Ku Yimaada Wesaska Birta Ah
Waa maxay cabirka saxanka birta aan lahayn ee ugu fiican?
Khadka Adeegga: +86 13925333418
Cinwaanka: Tignoolajiyada guriga Nodma, 110-1 Gaoping Avenue, Magaalada Sanjiao, Magaalada Zhongshan, Gobolka Guangdong
© Xuquuqda daabacaadda 2021: Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin.>